”မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အာဆီယံရဲ့ တခြားနိုင်ငံအရေးဝင်မစွက်တဲ့ မူဝါဒကို တရုတ်က ထောက်ခံသလို မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့အချုပ်ခြားအာဏာကို လေးစာကြောင်းနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြောကြားဖို့ အသင့်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအခြေနေ တင်းမာမှုလျော့ပါးစေဖို့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ဖို့ အသင့်ရှိကြောင်း” ပြောသွားတာပါ။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံတွင်း ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ တည်ငြိမ်မှု ရှိဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးကြဖို့လည်း ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ရှိကြဖို့၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ အခြေခံအကျိုးစီးပွါးအတွက် မိမိရဲ့ မတူကွဲပြားမှုတွေကို ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကပဲ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး အဖြေရှာကြဖို့ အပြင် နိုင်ငံ့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု တိုးတက်အောင် ဆက်လုပ်ဖို့ပါ ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ လက စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာမျိုးကို တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ လုံဝမြင်တွေ့လိုတာ မဟုတ်ကြောင်း တရုတ်အစိုးရက ပြောကြားခဲ့သလို ဒီလို အာဏာသိမ်းမှုမှာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ မီဒီယာတွေမှာ ဖေါ်ပြနေတာတွေကလည်း မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆိုထားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး အရပ်သားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးထားတာ အမြန်ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ကို တရုတ်က သဘောတူခဲ့သလို. မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေနေ ကြေညာတာ အတွက် စိုးရိမ်စိတ်ပူကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လို အပြောင်းလဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ် တရုတ်- မြန်မာဆက်ဆံရေးကတော့ ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ကြောင်းလဲ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးး က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မွနျမာပွဿနာ ဘကျလိုကျမှုမရှိပဲ ဝငျရောကျစစေ့ပျဖို့ တရုတျဆန်ဒရှိ
တရုတျနိုငျငံအနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈပှါးနတေဲ့ တငျးမာမှုတှပွေလြေော့အောငျ ဘကျမလိုကျပဲ သမာသမတျကကြ ညှိနှိုငျးပေးလိုတယျလို့ တရုတျ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Wang Yi က တနင်ျဂနှနေေ့ မှာ သတငျးထောကျတှကေို ပွောပါတယျ။
”မွနျမာနိုငျငံဟာ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျတနိုငျငံဖွဈပွီး အာဆီယံရဲ့ တခွားနိုငျငံအရေးဝငျမစှကျတဲ့ မူဝါဒကို တရုတျက ထောကျခံသလို မွနျမာပွညျသူတှရေဲ့ ဆန်ဒနဲ့အခြုပျခွားအာဏာကို လေးစာကွောငျးနဲ့ တရုတျနိုငျငံအနနေဲ့ သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ဆကျသှယျပွောကွားဖို့ အသငျ့ရှိပွီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လကျရှိအခွနေေ တငျးမာမှုလြော့ပါးစဖေို့ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ ကဏ်ဍကနေ ပါဝငျဖို့ အသငျ့ရှိကွောငျး” ပွောသှားတာပါ။
ဒါ့အပွငျ မွနျမာနိုငျငံ တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ နိုငျငံတှငျး ငွိမျးခမျြးမှုနဲ့ တညျငွိမျမှု ရှိဖို့ လိုအပျတာကွောငျ့ ညှိနှိုငျး ဆှေးနှေးကွဖို့လညျး ပွောပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျး သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးတှေ အနနေဲ့ တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျး ရှိကွဖို့၊ ပွညျသူလူထုရဲ့ အခွခေံအကြိုးစီးပှါးအတှကျ မိမိရဲ့ မတူကှဲပွားမှုတှကေို ဖှဲ့စညျးပုံနဲ့ ဥပဒဘေောငျအတှငျးကပဲ ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးပွီး အဖွရှောကွဖို့ အပွငျ နိုငျငံ့ရဲ့ ဒီမိုကရစေီ အသှငျကူးပွောငျးမှု တိုးတကျအောငျ ဆကျလုပျဖို့ပါ ပွောပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ လက စဈတပျကအာဏာသိမျးတာမြိုးကို တရုတျနိုငျငံအနနေဲ့ လုံဝမွငျတှလေို့တာ မဟုတျကွောငျး တရုတျအစိုးရက ပွောကွားခဲ့သလို ဒီလို အာဏာသိမျးမှုမှာ တရုတျအစိုးရရဲ့ ပါဝငျပတျသကျမှုရှိနတေယျဆိုတဲ့ မီဒီယာတှမှော ဖျေါပွနတောတှကေလညျး မဟုတျမှနျကွောငျး ငွငျးဆိုထားတာပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီး အရပျသားခေါငျးဆောငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ အပါအဝငျ ခေါငျးဆောငျတှကေို ဖမျးဆီးထားတာ အမွနျပွနျလှတျပေးဖို့ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေး ကောငျစီရဲ့ကွညောခကျြကို တရုတျက သဘောတူခဲ့သလို. မွနျမာနိုငျငံမှာ နိုငျငံတျော အရေးပျေါ အခွနေေ ကွညောတာ အတှကျ စိုးရိမျစိတျပူကွောငျးလညျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဘယျလို အပွောငျးလဲတှပေဲဖွဈဖွဈ တရုတျ- မွနျမာဆကျဆံရေးကတော့ ပွောငျးလဲမှာ မဟုတျကွောငျးလဲ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးး က ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။